လမ်းဘေးလေးမှာ သေတ္တာလေး တလုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေး ကြည့်လိုက်သော်အခါ – Shwe Naung
လမ်းဘေးလေးမှာ သေတ္တာလေး တလုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေး ကြည့်လိုက်သော်အခါ
အိမ်ရှေ့ မှာ သေတ္တာလေးတ လုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ြ ကာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်ေ မးကြည့်တာ ကိုယ်တော င်ငိုချင်လာတယ်…။ ကလေးဘဝထဲ က ရွှေပေါက်ကံထဲက လက်ဖက်ရည်ဆိုင် သေးေ လးတခုမှာ အလုပ် ဝင်လုပ်ခဲ့တာ ၁၀နှစ် နီးပါးရှိပြီတဲ့…. ဆိုင်တွေ ပုံမှန်ေ ရာင်းရချိန်မှာ ညဉ့်နက် တဲ့အထိခိုင်းပြီး မနက်အစောကြီး ထရတာမျိုး မငြီးမငြူလုပ်ပေးခဲ့ ပါတယ်တဲ့ …..။
ထမင်းစားရုံလေး ကျောခင်း တနေရာ စာလေး နဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့….စာမတတ် ပေမတ တ် တောက ကလေးတွေကို သက်သက်သာသာဈေးနဲ့ ခိုင်းခဲ့ပြီး …. အခုလိုဆိုင်တွေ ပိတ်ထားရချိ န်မှာတော့ တာဝန်မယူနို င်ဘူးဆိုပြီး ပြောဆိုမောင်း ထုတ်ပါ တယ်တဲ့ ….လမ်းပေါ်ထွက် လာရပေမယ့် ပိုက်ဆံလည်း တပြားမှမပါ ….. နေစရာ စားစရာလ ည်းမရှိ မန်းလေးပြန်ချင်ပါတယ် ဆိုလို့ ကိုသန်းမ င်းကြွယ်တို့ ပုလဲမီးသ တ်တွေဆီ အကူအညီေ တာင်းခဲ့ပေမယ့် ….
သူတို့လည်း လူပြည့်နေ လို့ တာဝ န်မယူနိုင်ပါဆိုလို့ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီလေး ငှားပေးပြီး ရွှေပေါက်ကံ Q centre ကို အကူအညီေ တာင်းဖို့ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ် …. ဆက်လက်ပြီးကူ ညီမယ့်သူပေါ်လာ ပါစေ….ကိုယ်တတ်နိုင် တဲ့ငွေလေးနဲ့လည်း ကူညီပေးလိုက် ပါတယ်….။ တကယ်ကို မျက်ရည်တွေ ကျမိပါတယ်…..။
အိမ္ေရွ႕ မွာ ေသတၱာေလးတ လုံးေပၚမွာ ထိုင္ေနလို႔ အခ်ိန္ၾ ကာလာေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ထြက္ေ မးၾကည့္တာ ကိုယ္ေတာ င္ငိုခ်င္လာတယ္…။ ကေလးဘဝထဲ က ေ႐ႊေပါက္ကံထဲက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ေသးေ လးတခုမွာ အလုပ္ ဝင္လုပ္ခဲ့တာ ၁၀ႏွစ္ နီးပါးရွိၿပီတဲ့…. ဆိုင္ေတြ ပုံမွန္ေ ရာင္းရခ်ိန္မွာ ညဉ့္နက္ တဲ့အထိခိုင္းၿပီး မနက္အေစာႀကီး ထရတာမ်ိဳး မၿငီးမျငဴလုပ္ေပးခဲ့ ပါတယ္တဲ့ …..။
ထမင္းစား႐ုံေလး ေက်ာခင္း တေနရာ စာေလး နဲ႕သာ ေက်နပ္ခဲ့ရတဲ့….စာမတတ္ ေပမတ တ္ ေတာက ကေလးေတြကို သက္သက္သာသာေစ်းနဲ႕ ခိုင္းခဲ့ၿပီး …. အခုလိုဆိုင္ေတြ ပိတ္ထားရခ်ိ န္မွာေတာ့ တာဝန္မယူနို င္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာဆိုေမာင္း ထုတ္ပါ တယ္တဲ့ ….လမ္းေပၚထြက္ လာရေပမယ့္ ပိုက္ဆံလည္း တျပားမွမပါ ….. ေနစရာ စားစရာလ ည္းမရွိ မန္းေလးျပန္ခ်င္ပါတယ္ ဆိုလို႔ ကိုသန္းမ င္းႂကြယ္တို႔ ပုလဲမီးသ တ္ေတြဆီ အကူအညီေ တာင္းခဲ့ေပမယ့္ ….
သူတို႔လည္း လူျပည့္ေန လို႔ တာဝ န္မယူနိုင္ပါဆိုလို႔ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီေလး ငွားေပးၿပီး ေ႐ႊေပါက္ကံ Q centre ကို အကူအညီေ တာင္းဖို႔ ပို႔ေပးလိုက္ပါတယ္ …. ဆက္လက္ၿပီးကူ ညီမယ့္သူေပၚလာ ပါေစ….ကိုယ္တတ္နိုင္ တဲ့ေငြေလးနဲ႕လည္း ကူညီေပးလိုက္ ပါတယ္….။ တကယ္ကို မ်က္ရည္ေတြ က်မိပါတယ္…..။